EyoMnga ngo-2020 - Iphepha 29 lama-29 - Funda ukurhweba
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Bitcoin Cash (BCH): I-Bch iphinda ifumane i-Bullish Momentum, ngoMeyi iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isiphumelele kwakhona.
Ukuhlaziywa: 1 Disemba 2020
Ukubuyela kwi-BCH, ukufikelela kwinqanaba eliphezulu le- $ 316
Ingqekembe inokuthi ifikelele kwixabiso ekujoliswe kulo le- $ 440
I-Bitcoin Cash (BCH) yezibalo zangoku
Ixabiso langoku: $313.29
Intengo yeNtengiso: $ 5,839,272,992
Umthamo wokuThengisa: $ 3,886,823,482
Iindawo ezinkulu zokubonelela: $ 325,, $ 350, $ 375
Iindawo ezifuna kakhulu: $ 200, $ 175, $ 150
Bitcoin Cash (BCH) Uhlalutyo lwamaxabiso ngoNovemba 30, 2020
I-Bitcoin Cash ibuye ngaphezulu kwe-260 yeedola emva kokufumana ukophuka kwangoko. I-BCH ngaphambili iye yaphosa kwi- $ 265 ephantsi ukusuka kwixabiso eliphakamileyo le- $ 360. Ukuphahlazeka kwaba ngenxa yokungakwazi kweenkomo ukwaphula uxinzelelo kwi-360 yeedola. Namhlanje, i-BCH ibuyile kwaye ithengisa nge-316 yeedola. Ingqekembe inokuthi iphinde iphinde iphinde iphinde iphule ukuxhathisa ngaphezulu. Ukunyuka okuphezulu kuya kuqhubeka njengokuhla kwamaxabiso ngaphezulu kwee-SMAs. I-BCH iyakunyanzeliswa ukuba ishukume ecaleni ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukwaphula ukuxhathisa okungaphezulu.
I-BCH / i-USD - Itshati yemihla ngemihla
Ukutsalwa kwezalathi zeBitcoin Cash Technical
Amaxabiso e-BCH aqhekeza ngentla komgca oxhathisayo wesitishi esinyukayo kwaye avale ngaphezulu. Ibonisa ukunyuka okuphezulu kwengqekembe. Ingqekembe ikwinqanaba lama-59 lamaxesha esalathiso samandla esihlobo. Ibonisa ukuba ikummandla ophakamileyo ngaphezu komgca osembindini wama-14.
I-BCH / USD-4 Itshathi yeYure
I-BCH ikwi-uptrend entsha. Isixhobo seFibonacci sibonakalise ukuqhubela phambili kokunyuka kwengqekembe. Ngomhla kaNovemba 21 uptrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyisa le-50 %% Fibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-BCH inokuthi inyuke kwaye ifike kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions. Oko kukuphakama kwe- $ 383.20.
tags BCH, BCH / USD, I-Bitcoin Cash, Uhlalutyo lwamaxabiso
← Entsha izithuba 1 ... 28 29abaDala izithuba →